के छ नेकपाको अन्तरपार्टी निर्देशनमा ? - Dainik Online Dainik Online
के छ नेकपाको अन्तरपार्टी निर्देशनमा ?
प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७७, मंगलबार ९ : ५६
काठमाडौं । नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सोमबार १९ पृष्ठको अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेका छन्।
उनीहरूले भदौ २६ लाई पुरानो विवादमा नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गर्ने बताएका छन्। पुनः पुरानै अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नगर्ने सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता ओली र दाहालले जनाएका छन्।
‘पार्टीभित्र देखा परेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाचांै बैठक समापनको मिति २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गर्ने र पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, निर्देशनको पृष्ठ ७ को बुँदा नम्बर ५.६ मा छ।
पार्टी एकतायताका २७ महिनासम्म ‘पुरानो बक्यौता’ विषयमै पार्टी र सरकारले गोलचक्कर लगाइरहँदा दुवै मोर्चा लथालिंग र प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रश्न पार्टीभित्रै उठेको थियो।
यही अवस्थामा अध्यक्षद्वयले त्यस्तो प्रतिबद्धतासहितको निर्देशन जारी गरेका हुन्। यो सर्कुलर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरूलाई पठाइएको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छापिएकाे छ ।
पार्टी एकताका बेला अध्यक्षद्वयको कार्याधिकार बाँडफाँटबारे भएका सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर विवाद हुँदा शक्ति संघर्ष चर्किंदै आएको थियो। एकतापूर्व दुई अध्यक्षले अढाई÷अढाई वर्ष आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमति गरेका थिए।
उक्त सम्झौता सार्वजनिक भएपछि २०७६ मंसिर ४ मा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न ओलीले ५ वर्ष नै सरकार र दाहालले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सचिवालयले निर्णय गरेको थियो।
तर, त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दाहालले प्रश्न उठाएका थिए। स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकले ओली र दाहालको अधिकारलाई थप व्याख्या गर्ने र प्रस्ट्याउने काम गरेको छ। उपाध्यक्ष गौतमकै सवालमा पनि प्रतिनिधिसभामा जाने विषयमा नेकपाले चक्कर लगाइरहेको थियो।
पछि गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा नभई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। त्यसमा पनि संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, भंग गर्नेलगायतको गोलचक्करमै नेकपा घुमिरह्यो। ६ महिनासम्म पनि यो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि पुनः भदौ १८ को सचिवालयले गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्नु परेको थियो।